Phuket VIP Mercury Ny Birao - Famolavolana
Ny Birao Miorina amin'ny lohahevitry ny fisokafana sy ny fitrandrahana marika lalina, mikaroka ny famolavolana ary namorona ny fampidirana maso ny fanitarana ny fahitana sy ny tantaran'ny marika miaraka amin'ny planeta no singa mamorona. Ny vahaolana dia namaha ireto olana telo ireto niaraka tamin'ny fisainana vaovao vaovao: Ny fandanjalanjana ny fisokafan'ny toerana sy ny fiasa; Fizarana sy fitambaran ny faritra asa ifotony; Ny tsy tapaka sy ny fanovana ny fomba spatial fototra.
Anaran'ny tetikasa : Phuket VIP Mercury, Anaran'ny mpamorona : Songhuan Wu, Anaran'ny mpanjifa : N-HD design.
Ny Birao Songhuan Wu Phuket VIP Mercury